Diyaaradaha Turkish Airlines ah oo maanta markale ku degi waayay garoonka Aadan Cadde – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Diyaaradaha Turkish Airlines ah oo maanta markale ku degi waayay garoonka Aadan Cadde
Labo diyaaradood oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines ayaa la sheegayaa inay maanta markale ku degi waayeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadib markii la sheegay inay jiraan cilad dhinaca hawada ah.
Diyaaradahaasi oo dhowr jeer ku dul wareegay hawada sare ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyn dib uga laabtay halkaasi, iyadoona arrintaan ay noqotay mid dhowr jeer soo noq-noqotay.
Maamulka diyaaradda shirkadda Turkish Airlines iyo saraakiisha waaxda socdaalka ee garoonka Aadan Cadde oo ka hadlay sababta keentay in diyaaradahaasi ay ugu degi waayeen garoonka ayaa ku sheegay inay tahay hawada oo xumeyd awgeed.
Diyaaradaha Turkish Airlines ayaan ku degi karin xad ka baxsan xadka loo dejiyay oo dabeylaha ah, waxayna taasi keentay in rakaab farabadan ay arrinkaasi u xayirmaan.
Si kastaba ha ahaatee, diyaaradaha Turkish Airlines ayaa ah kuwa kaliya ee heer caalami uga howlgala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ay dadka kasoo qaadaa dalalka ku yaalla daafaha dunidda.